यी रोगले झर्छ कपाल - Naya Patrika
यी रोगले झर्छ कपाल
डा. ललितकुमार मिश्र ,होमियोप्याथी कन्सल्टेन्ट आस्था होमिया क्लिनिक
काठमाडौं, २९ जेठ | जेठ २९, २०७५
मानिसको कालो कपाल प्राकृतिक हो । यसले सौन्दर्य र व्यक्तित्वलाई आकर्षक देखाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । यति मात्र नभएर सुन्दर कपालले आत्मविश्वास बढाउने पनि काम गर्छ । यस्तो कपाल उमेर ढल्किएसँगै बिस्तारै सेतो भएर जान्छ, झर्छ । तर, यस्तो नभएर पछिल्लो समय युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने, झर्ने समस्याबाट थुप्रै मानिस पीडित छन् । यी हुन् समयअगावै कपाल झर्ने कारण :
जन्मेको केही समयपछि नवजात शिशुको कपाल झर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसको केही दिनपछि स्वतः नयाँ कपाल पलाउन थाल्छ । तर, कहिलेकाहीँ यो समस्याको रूपमा पनि देखिन सक्छ । यो कुनै रोगको संकेत वा एलोपसिया पेटर्न पनि हुन सक्छ ।
टाउको, गिदी या दुवै साइडबाट कपाल कम हुँदै जानुलाई मेल पेटर्न भनिन्छ । पैतृक या कुनै अज्ञात कारणले यस्तो समस्या हुन सक्छ ।
शरीरको कुनै स्थानविशेषको कपाल झर्नुलाई एलोपसिया एरिएटा भनिन्छ । यस्तो समस्या भएमा अन्डाकार या गोलाकार रूपमा कपाल झर्ने गर्छ ।
एकसाथ अनिश्चित स्थानबाट एक–एक गरी कपाल झर्नुलाई डिफ्युजन पेटर्न भनिन्छ । यस्तो समस्या देखिनु भनेको औषधिको अनुचित र अनावश्यक प्रयोगको संकेत हो ।
आँखीभौँ झर्नु कुष्ठरोग या मिकस्सोडिमाको संकेत हो ।
कतिपयमा कपाल कडा र पातलो हुने पनि गर्छ । यस्तो हुँदै कपाल चाँडै टुट्ने समस्यालाई कुपोषणको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । यसैको कारण समयअगावै कपाल फुल्ने, टुट्ने र झर्ने क्रम पनि बढ्ने गर्छ ।
कहिलेकाहीँ कुनै भागमा गोलाकार भई कपाल झर्नु पनि समस्या हो । यस्तो
समस्या भिरिंगीको संकेत पनि हुन सक्छ ।
कतिपयमा खुट्टाको रौँ पनि झर्दै जाने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या मधुमेह, धमनीको कडापन र यससम्बन्धी रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
क्षयरोगका कारणले पनि टाउको वा शरीरको कुनै भागको रौँ गोलो गरी झर्ने र दाद आउने समस्या हुन्छ ।
यसका साथै अत्यधिक मानसिक चिन्ता या शारीरिक श्रम, केमिकलयुक्त साबुनले कपाल पखाल्दा टाउकोमा सोरायसिस नामक छालासम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । जसले चाया आउने समस्या हुन्छ र बिस्तारै यही नै कपाल झर्ने कारण बन्छ ।
महिला गर्भवती हुँदा उनीहरूको कपाल केही कडा र मोटो हुने गर्छ । त्यस्तै, प्रसव भइसकेपछि पनि कपाल टुट्ने र झर्ने गर्छ ।
#कपाल झर्ने समस्या
बिहान उठेपछि जे गर्नुहुँदैन
के हो डिएनए ?
महिनावारी अनियमित छ ? यसो गर्नुहोस्